Android TV: ihe ọ bụ na ihe ọ na-enye anyị | Nzukọ mkpanaaka
Android TV: ihe ọ bụ na ihe ọ na-enye anyị
Edere Ferreno | 09/11/2021 14:00 | android, Sistemụ arụmọrụ
Kedu ihe bụ Android TV? Nke a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị ọrụ nwere n'ezie. Aha a nwere ike ịbụ ihe na-ada ka ọtụtụ n'ime gị maara nke ọma, ebe ọ bụ aha nke nọworo n'ahịa ruo afọ ole na ole, n'agbanyeghị na ọnụnọ ya ga-ebelata maka Google TV, nke anyị ga-agwakwa banyere ya. ị ọzọ na n'ihu.
Anyị na-agwa gị Kedu ihe bụ Android TV na gịnị ka sistemụ arụmọrụ a nwere inye, yana ihe ga-eme ugbu a Google TV ga-anọchi ya ma ọ bụ na ọ ga-abụ n'ọdịnihu dị nso. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike nweta azịza nye ajụjụ gị gbasara sistemụ arụmọrụ a na-ere ahịa kemgbe afọ ole na ole.
1 Gịnị bụ gam akporo TV
2 Otu esi enweta gam akporo TV
4 Ntụziaka Google
Gịnị bụ gam akporo TV
Android TV bụ ụdị sistemụ arụmọrụ gam akporo sitere na Google nke emepụtara kpọmkwem maka igwe onyonyo. N'ahịa anyị nwere ike ịzụta igwe onyonyo site na ụdị dị ka LG ma ọ bụ Sony na-eji sistemụ arụmọrụ a dị ka ọkọlọtọ, dịka ọmụmaatụ. Ụdị usoro a maka igwe onyonyo na-achọ inye anyị ohere ịnweta ọdịnaya n'ụzọ dị mfe, yana ahụmịhe nchọgharị ka mma karịa Smart TV.
Na ihuenyo ụlọ Android TV anyị nwere ohere ịnweta ọdịnaya anyị nwere ike ịnụ ụtọ na TV, ma site na nyiwe nkwanye ugwu dị ka Netflix, Amazon Prime Video, Disney + ma ọ bụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye na ịnwe na ya nchịkọta ọdịnaya ma ọ bụ ọwa nkeonwe anyị. Enwekwara ndụmọdụ ọdịnaya nwere ike ịmasị anyị na sistemụ a, ka anyị wee chọpụta usoro ọhụrụ ma ọ bụ ihe nkiri.
N'ịbụ onye na-arụ ọrụ Google, anyị nwere ohere na Google Play Store na ya. N'ihi ụlọ ahịa ahụ, a na-ahapụ anyị ka anyị budata ngwa na egwuregwu na telivishọn. Emebere ọtụtụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu maka sistemụ arụmọrụ a yana ọtụtụ ndị ọzọ na-adakọ ọnụ, nke mere na mgbakwunye na ekwentị mkpanaaka, anyị nwere ike iji ha na telivishọn na-eji usoro a. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ahụmahụ ka mma nke iji telivishọn.
Ọzọkwa, telivishọn nwere sistemụ arụmọrụ a Ọ na-eji Google Assistant na-abịakarị. Yabụ ị nwere ike iji gam akporo TV rụọ ọrụ na TV gị site na iji iwu olu, dị ka ịchọ ọdịnaya ma ọ bụ ịgbanwe ọwa. Nke a bụ ihe a na-etinyekarị n'ime njikwa ihe ntanetị TV, ebe enwere bọtịnụ raara onwe ya nye maka onye inyeaka, nke mere na mgbe ịpịrị ya, anyị nwere ike ịme iwu olu ahụ ozugbo.
Otu esi enweta gam akporo TV
Awụnyere sistemụ arụmọrụ a dị ka ọkọlọtọ na igwe onyonyo nke ọtụtụ ụdị. Ụlọ ọrụ dị ka OnePlus, Sony, Philips, Sharp ma ọ bụ HiSense, n'etiti ndị ọzọ, malite telivishọn na-eji Android TV dị ka ha sistemụ. Nhọrọ nke ụdị na ahịa dị nnọọ obosara, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe na-adịkwa iche n'etiti mba, nke mere na na ụfọdụ mba ị nwere ike họrọ ọzọ telivishọn na-eji a sistemụ dị ka ọkọlọtọ, ihe atụ.
Na mgbakwunye, anyị nwekwara ngwaọrụ dị ka Chromecasts na ihe ndị ọzọ, dị ka Xiaomi TV Box, nke na-enye gị ohere iji sistemụ arụ ọrụ a kwadebe telivishọn gị. Ha bụ ngwaọrụ mgbe ejikọtara na telivishọn nkịtị, Smart TV nkịtị na-enweghị sistemụ arụmọrụ, ga-enye ohere ịnweta ọrụ ndị anyị maralarị na sistemụ arụmọrụ Google a maka igwe onyonyo. Nke a bụ nhọrọ ọzọ maka ndị na-achọghị ịzụta TV ọhụrụ, mana ọ ga-amasị gị ịnweta atụmatụ ndị ahụ nke sistemụ arụmọrụ Google na nke ha.
Ọ dị mkpa na telivishọn ga-enwe njikọ HDMI ka ị nwee ike iji ngwaọrụ ndị a, ma igbe TV na ngwaọrụ ndị dị ka Chromecast na mmepụta. Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ebe ha ga-jikọọ na otú ekwe ka ị na-enwe Android TV na telivishọn. Ọnụ ego nke ụdị ngwaọrụ a dịgasị iche iche, ma ha na-amalitekarị site na ihe dịka 50 ma ọ bụ 60 euro n'ihe dị ọnụ ala ma dị mfe.
Na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị a, mana ị ga-akpachara anya, ebe ọ bụ na ọ bụghị onye ọ bụla na-eji Android TV dị ka e kwere ná nkwa. Ya mere, ndị ọrụ na-eche echiche ịzụrụ otu na-atụ aro ka ịhọrọ otu n'ime akara a ma ama, nke a maara na-eji sistemụ arụmọrụ a dị ka nkwa. Ụlọ ọrụ dị ka Xiaomi ma ọ bụ Google bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya karị, ya mere ọ nwere ike ịba uru iburu ngwaahịa ha n'uche mgbe ịzụrụ otu.
Otu n'ime nnukwu uru nke sistemụ arụmọrụ a bụ nke ahụ Enwere ike ibudata ọtụtụ ngwa na TV. Mgbe ọtụtụ na-achọ ịma ihe Android TV bụ, ị nweghị ike ịnyere aka kama ikwu maka nnukwu nhọrọ nke ngwa dị. Ebe ọ bụ na anyị nwere ike ibudata ngwa na TV ekele maka ohere ahụ na Google Play Store dị ebe ahụ. Ya mere, TV nwere ike ịghọ ebe ntụrụndụ n'ụlọ gị, ebe ị nwere ike ịnweta egwuregwu na ngwa.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ nzọ na nbudata ngwa ka ilele ọdịnaya gụgharia na TV gị. Android TV nwere ngwa dị ka Netflix, Amazon Prime Vide, Roku, Disney +, YouTube na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, site na iji ngwa ị ga-enwe ike ịnweta akaụntụ gị na ngwa ndị a ma si otú ahụ lelee ọdịnaya gị ozugbo na TV. Nnukwu ihuenyo dị ka TV gị bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-enye aka na ahụmịhe dị mma mgbe ị na-elele ọdịnaya ndị a.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ibudata ọtụtụ ụdị ngwa na Android TV. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike budata ngwa akụkọ, nke ị nwere ike na-emelite mgbe niile maka ihe na-eme, ma ọ bụ ọbụna ngwa ihu igwe. Na mgbakwunye, sistemụ arụmọrụ na-akwado ọnụ ọgụgụ buru ibu nke egwuregwu, ka i wee nwee ike igwu ha na nnukwu ihuenyo. Enwere egwuregwu dị na Play Store a na-amalite na-eche echiche karịa ihe niile gbasara ojiji ha na telivishọn, yabụ ị nwere ike nweta ahụmịhe dị mma mgbe ị na-egwu ha. Na mgbakwunye, n'ihe gbasara Android, ọtụtụ egwuregwu anyị nwere na Ụlọ Ahịa Google Play bụ egwuregwu efu.
Android TV na-abịa na Google Assistant wuru dị ka ọkọlọtọ. Enwere ike iji onye enyemaka a site na ime obodo, dị ka anyị kwuru na mbụ, ebe ọ na-enwekarị bọtịnụ raara onwe ya nye. Inwe onye inyeaka dị ga-enye anyị ohere ịme iwu olu iji chịkwaa telivishọn, na mgbakwunye na inwe ike iji iwu olu ndị ahụ na ngwa dị na ya, dị ka Netflix, nke na-akwado njikwa olu ndị ahụ.
Ụfọdụ n'ime iwu olu ndị ahụ ga-adabere ma ị nwere ndenye aha na ụfọdụ ọrụ, dị ka Netflix, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịrịọ onye inyeaka ka ọ kpọọ ụfọdụ ọdịnaya n'elu ikpo okwu nkwanye a, ọmụmaatụ. Mana n'ozuzu, ngwa ndị ị rụnyere na telivishọn gị na gam akporo TV ga-enwe nkwado maka njikwa olu ndị ahụ, ka ị nwee ike iji ha na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Njikwa ma ọ bụ iwu olu na Google Assistant nke ị nwere ike iji dị iche iche. Ị nwere ike iji ya gbanwee ọwa ahụ, gaa na ọwa telivishọn ma ọ bụ ngwa na-egwu ụfọdụ ọdịnaya, rịọ ya ka o welie ma ọ bụ wetuo olu ma ọ bụ kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị ịkpọghachi ọdịnaya ndị ahụ, dịka ọmụmaatụ. Njikwa dị mfe mana nke ahụ ga-enye gị ohere iji igwe onyonyo gị nke ọma oge niile.
Emebere Chromecast nwere Google TV na Ọktọba nke afọ gara aga. A na-ahụ mwepụta a dị ka mmalite nke oge ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ na-ewebata interface ọhụrụ na usoro ọrụ ọhụrụ gbasara gam akporo TV. Ya mere, ihe niile na-egosi na usoro ọhụrụ a ga-eji nwayọọ nwayọọ dochie nke a.
Emebere Google TV ka ọ nye ọtụtụ nhọrọ nhazi karịa gam akporo TV. Nke a bụ ihe a pụrụ ịhụ na mpaghara dị iche iche dị ka ndụmọdụ, nke dabeere na ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ ka ọ bụrụ nke ziri ezi, dị ka interface ya na ọrụ ya. Profaịlụ onye ọrụ nke nwere ike ịmepụta ugbu a n'ụzọ ka mma bụ ihe atụ ọzọ dị mma nke a, dịka ọmụmaatụ.
Ọzọkwa, anyị na-ahụkwa ọhụrụ imewe. Google TV na-ahapụ anyị imewe emebere ka ịnyagharịa ngwa ngwa na ngwa ngwa, na mgbakwunye na inwe ọtụtụ nhọrọ na mmemme dị ma e jiri ya tụnyere Android TV. Yabụ na ọ na-achọ ịnye ndị ọrụ ahụmịhe onye ọrụ ka mma na nke a, bụ nke ahaziri ahaziri maka nhọrọ dịnụ ma dị mfe iji ekele maka interface ahụ emegharịrị.
Google nwere atụmatụ ịgbasa ọnụnọ Google TV n'afọ na-esote. N'ezie, ngwaọrụ ndị na-emelite na-ahụ ka Android TV na-ahapụlarị ebe ya na interface ọhụrụ a. Isi ihe na-anọgide na-abụ otu ihe ahụ, ma Google ahapụla anyị mgbanwe na nhazi ya na nkà na ụzụ ya, nke a na-ahụta dị ka ndị ọrụ dị mma karịa ụdị nke gara aga. Ọhụrụ a interface ga-inweta ọnụnọ na ahịa na ga-ejedebe kpamkpam dochie Android TV n'oge ụfọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Android TV: ihe ọ bụ na ihe ọ na-enye anyị
Telegram ọ dị mma? Anyị na-agwa gị ihe niile
Spotify maka Mac: Otu esi enweta ihe kacha mma na ya